Ciidamo Mareykan ah oo la geeyay xadka Mexico - BBC News Somali
Ciidamo Mareykan ah oo la geeyay xadka Mexico
7 Abriil 2018
Go'anka Trump waxa uu ka careysiiyay dadka reer Maxico
Ciidamo ka socda ilaalada qaranka ee gobolka Texes ee dalka Mareykanka ayaa loo daad gureeyay xadka Mareykanka uu la wadaago Maxico. Ciidammadan ayaa la sheegay inay gaarayaan ilaa iyo laba boqol iyo konton askari.
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump oo isagu soo hindisay qorshahan ayaa sheegay inuu doonayo in xadkaasi la geeyo ciidamo gaaraya afar kun, kuwaasi oo halkaasi joogi doona ilaa iyo inta laga dhameystirayo darbiga Mareykanka uu ka dhisayo halkaasi.
Gobolka Arizona ee dalka Mareykanka ayaa iyaguna la sheegay in dhankooda ay qorsheynayaan in xadka ay geeyaan 250 askari oo kale, waxaana tallaabadan ay imaneysa xili madaxweyne Trump uu ku dhawaaqay qorshe cusub oo lagaga hortagayo muhaajiriinta.
Naqshadaynta derbiga Mareykanka iyo Mexico oo billaabatay
Mexico iyo Trump oo isku haysta qarashka derbiga
Mexico oo seero ka samaysay badda gudaheeda
Trump ayaa sidoo kale sheegay inuu doonaayo in la soo afjaro wax uu ku tilmaamay 'Qabo oo sii daa' oo uu ula jeeday muhaajirinta sida sharci darada kusoo gala Mareykanka, kadib na inta la qabto lasii daayo.
Trump waxaa kale oo uu soo jeediyay in muhaajirinta la geeyo goobo lagu hayo inta ay socota dhageysiga dacwadooda.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa u muuqda mid ahmiyad gaar ah siinaya sidii looga hortagi lahaa muhaajiriinta ku qulqulaya Mareykanka, maadaama uu dhowr jeer arrimaha muhaajiriinta kaga hadlay bartiisa Twitter-ka, waxaa uuna sidoo kale ku eedeyay xisbiga Dimoqardiga inay albaabada u fureen wax uu ku tilmaamay ''daroogada iyo dambiyada'', waxaana tallaabadan uu qaaday Mareykanka uu ku tilmaamay mid horumar ah.
Qaxootigii gubay xeradii ay ku jireen oo xabsiga loo taxaabay
Maxay tahay haddiyadda uu Joe Biden guddoonsiiyay Boris Johnson ee la hadal hayay?
TOOS Diyaaradaha Soomaaliya iyo Kenya isaga kala gooshayey oo dib u billowdaykjkj
Shan arrimood ka ogow doorashada Deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya
9 Juunyo 2021
Waa kuma Barkhad Jaamac Batuun?
6 Juunyo 2021
Runtu waa maxay : Maxay yihiin Afarta arrimood uu Abiy Axmed ku guuleystay?
8 Juunyo 2021
Biyo-xidheenka Itoobiya: Ma xabbad bay gaadhay oo xalkii diblamaasiyadeed waa dhamaaday?
5 Juunyo 2021
Afar arrimood oo ku saabsan hoggaamiyihii 'is qarxiyay' ee Boko Xaraam
7 Juunyo 2021
Ninka 12 jeer ka baxsaday xabsiga ee dadka badan ka yaabiyay
Shiinaha ma wuxuu 'dabar goynayaa' Muslimiinta Uyghurs?
Wax ka ogow Warbixinta ciidamada Soomaaliya ee 'ka dagaallamay Tigray'
Laba arrimood oo ku saabsan dharbaaxada lagu dhuftay madaxwaynaha Faransiiska
Sawirro cajiib ah oo laga soo qaaday meero aan dhulka ahayn oo la baahiyay
Waa sidee xaaladda caafimaad ee ciyaarhanka Christian Eriksen?
'Nibiri baa i liqay, xilli aan badda ku jiray, xoogaa kadibna wuu i soo tufay'